Amụma Nzuzo | Ota Ward Cultural Promotion Association
Dabere na "Iwu maka Nchedo Ozi Nkeonwe" nke malitere ike zuru oke n'April 2005, "Ota Ward Cultural Promotion Association" (nke a na-akpọ "Association") na-amata mkpa ozi dị na ndị ahịa. Anyị ga-eme ihe ndị a.
XNUMX. XNUMX.Kedu ihe bụ ozi onwe onye?
"Ozi nkeonwe" na mkpakọrịta a na-ezo aka na ozi niile edebara aha mgbe ị na-enye tiketi, wdg. (Kpamkpam, ihe niile a ga-eji amata gị gbasara onwe gị, dị ka aha gị, adres gị, nọmba ekwentị, nọmba faksị, na adresị adresị iimel)
XNUMX.Ojiji nke ozi nkeonwe
A na-eji ozi nkeonwe nke onye ahịa nyere mgbe ịzụrụ tiketi ahụ, wdg, maka ebumnuche ndị a, na mgbakwunye na ịnyefe tiketi ịchọrọ, wdg.ị na gị na ịkpọtụrụ kọntaktị ngwa ngwa n'ihi ịkagbu arụmọrụ ahụ, wdg. ga-eji ya naanị maka.
Na-eziga ndị ahịa ozi ziri ezi
Inye oru di iche iche
O gwụla ma enwere ezigbo ihe kpatara ya (dịka ọmụmaatụ, izipu nhazi), anyị agaghị enye ya ndị ọzọ karịa ndị mmekọ azụmaahịa na ndị ọrụ ngo.Na mgbakwunye, mgbe ị na-azụ ahịa na ndị ọzọ na mpaghara nke atọ n'ime mkpa dị mkpa, anyị ga-amanye onye na-esite na mpụga iji jikwaa ozi nkeonwe yana lekọta ya.
XNUMX. XNUMX.Nchịkwa nchekwa nke ozi nkeonwe
Anyị ga-ewere usoro mgbochi ihe egwu dị egwu yana usoro nchekwa megide nnweta na-enwetaghị ikike, ọnwụ, mbibi, ụgha, ụgha, wdg nke ozi nkeonwe enyere.
XNUMX.Nhazi / usoro / mmuta
Ndị otu a ga-ehiwe iwu gbasara njikwa ozi nkeonwe, mee ka onye na-ahụ maka njikwa mara, ma debekwa usoro iji kwado nchedo ozi nkeonwe.Na mgbakwunye, anyị ga-akụziri ndị ọrụ anyị gbasara nchekwa nke ozi nkeonwe ma mee ka ha mara.
XNUMX.Ngosipụta / ndozi nke ozi nkeonwe, wdg.
Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ chọrọ igosipụta ma ọ bụ dozie ozi nkeonwe nke anyị nyere, anyị ga-aza ngwa ngwa n'ime oke dị mkpa ma dị mkpa.
XNUMX.Nrube isi na iwu na ụkpụrụ
Thetù a ga-agbaso iwu na ụkpụrụ na ụkpụrụ ndị ọzọ metụtara nchekwa nke ozi nke ndị ahịa.Na mgbakwunye, anyị ga na-enyocha ma melite ọdịnaya nke iwu a.
146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 1-3 N'ime Ota Citizen's Plaza
Mmezi na nyocha ụbọchị (Mee 5-May 27), nhicha mechiri, mechiri emechi nwa oge